हार्डवेयर, सफ्टवेयर ... वेबवेयर? | Martech Zone
कम्प्युटर ईन्डस्ट्रीको विकासमा, हामीसँग छ हार्डवेयर - अनुप्रयोगहरू चलाउनको लागि आवश्यक उपकरणहरू। र हामीसँग थियो सफ्टवेयर, समाधानहरू जुन ती संसाधनहरूको कार्य गर्नको लागि प्रयोग गरियो जुन हामीले फरक मिडियाबाट खरीद गर्न र स्थापना गर्न सक्दछौं। आजकल, तपाईं मिडिया बिना सफ्टवेयर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
हार्डवेयर र सफ्टवेयरको दुई दशकहरू
हार्डवेयरको अपग्रेड र प्रतिस्थापन छ। मैले ईमान्दारीसाथ मैले मितिमा स्वामित्व पाएको सबै कम्प्युटरहरूको ट्र्याक हराइसकेको छु। मेरो घरमा एक मृत ल्यापटपको साथ मसँग let भन्दा कमको कंकाल अवशेषहरू छन्।
सफ्टवेयरसँग स्थापना र अपग्रेड हुन्छ जसले सफ्टवेयर अनुप्रयोगमा परिवर्तनहरू स्थापना गर्दछ। यो एउटा पुरानो प्रणाली हो जुन हामी अझै काम गर्छौं र आज पनि संघर्ष गर्छौं। मसँग आज एक सफ्टवेयर अद्यावधिक थियो जसमा मलाई बन्द गर्न र मेरो म्याकबुकप्रो पुन: सुरु गर्न आवश्यक पर्‍यो। मसँग कहिले पनि ओएसएक्स अपडेट खराब हुन सकेको छैन, तर प्रत्येक चोटि म मद्दत गर्न सक्दिन तर अलिकति प्यासि get छ - यो सोचमा कि सबैभन्दा खराब हुन्छ र म मेरा सबै कामहरू हराउछु। मसँग एक नेटवर्क ड्राइभ छ जहाँ म मेरा डाउनलोड गरिएका अनुप्रयोगहरू भण्डारण गर्दछु र एक सीडी बाइन्डर जहाँ म भण्डारण गर्दछु (र तीनिहरू हराइरहेको भेट्टाउँछन्)।
गुगल स्प्रिडशिट, गुगल एनालिटिक्स, जीमेल, एक्स्याक्टरेट, र अन्य धेरै को एक सफ्टवेयर 'वेब-आधारित अनुप्रयोगहरू' वा 'ब्राउजर-आधारित अनुप्रयोगहरू' द्वारा जान्छ वा हामी एक संक्षिप्तमा पनि, SaaS। यो भय terrible्कर संक्षिप्त रूप हो र व्यवसायको प्रकारको वर्णन गर्दछ यो यो 'वेयर' प्रकार भन्दा बढी छ। साथै, धेरै सास अनुप्रयोगहरू अझै अपग्रेड वा प्रमुख रिलीजहरू छन्। तिनीहरूलाई स्थापना वा रिबुट आवश्यक छैन, तर तिनीहरू समयका लागि अनुपलब्ध छन्।
आजका अनुप्रयोगहरूका लागि उत्तम नाम नेटवेयर हुन सक्छ, तर यस्तो देखिन्छ नोभेल त्यो शब्द ट्रेडमार्क छ। वेबवेयरले काम गर्न सक्दछ, तर यस्तो देखिन्छ C | नेट त्यो प्रयोग गरिरहेको छ। यस्तो देखिन्छ कि ब्राउजरवेयर एक सम्भावना हुन सक्छ - तर यो एक अतिरिक्त अक्षर हो।
वेबवेयर किन होईन?
तल्लो रेखा त्यो हो कि वेबवेयर (मैले ट्रेडमार्क याद गरेन) हाम्रो अनुप्रयोगहरूको अर्को विकास हो। आज, अनुप्रयोगहरू चालु गर्न रोक्नको लागि वास्तवमा कुनै आवश्यकता छैन। हामीसँग हाम्रो अनुप्रयोगमा सयौं पृष्ठहरू काममा छन् र नयाँ पृष्ठहरू स्पिन गर्न सक्दछन् कहिले पनि पुरानोलाई तल नलगाईकन। मलाई पक्का विश्वास छ कि केहि विकास पनि हुन सक्दछ जहाँ प्रयोगकर्ताहरू ट्रान्जिसनहरू पुरानो र नयाँ अनुप्रयोगहरूको बिच हुन सक्छ।
डाटाबेस उडानमा प्रतिलिपि गर्न सकिन्छ, वा नयाँ अस्थायी तालिकाहरू संक्रमण समायोजन गर्न सकिन्छ। हो, यो अतिरिक्त काम हो, तर मेरो कुरा यो हो कि यो सम्भव छ। हामीले हाम्रो ग्राहकहरुलाई अवरोध गर्न आवश्यक छैन।
मेरो घरमा काम गर्ने फ्लपी ड्राइभ छैन। म सायद कम नै मेरो सीडी / डीभीडी प्रयोग गर्छु। लगभग सबै कुरा म अब वेबमा आधारित छ। जब म सफ्टवेयर डाउनलोड र स्थापना गर्छु, म प्राय: मेरो प्रतिलिपि बचत गर्दछु भैंसो टेक नेटवर्क ड्राइव।
व्यापार मा पनि, यो आवश्यक छैन। जब मैले सुरु गरेँ सानो इण्डियाना प्याट Coyle को लागी, हामी एक होस्ट संग गएनौं। अनुप्रयोग निर्माण गरीएको होस्ट गरिएको हो Ning। हामीसँग इशारा गर्दै सबै डोमेन सेटिंग्स छन् Google Apps जहाँ हामी ईमेलको साथै गुगल डक्स प्रयोग गर्न सक्छौं। कुनै हार्डवेयर छैन, सफ्टवेयर छैन ... तर वेबवेयर।
हामी यसलाई वेबवेयर किन भन्दैनौं?
टैग: हार्डवेयरसफ्टवेयरसफ्टवेयर सेवाको रूपमावेब अनुप्रयोगहरूवेब अनुप्रयोगहरूवेब प्लेटफार्महरूवेब-आधारित प्लेटफार्महरूवेबवेयर
जनवरी १, २०१ 16 १२::2008 अपराह्न
त्यो राम्रो नाम हो।
डोमेन नाम पहिल्यै लिइएको छ
CNET द्वारा स्वामित्व प्राप्त
यो बन्द हुनेछ?
मलाई थाहा छैन तर यो हुन सक्छ
जनवरी 17, 2008 मा 2: 52 एएम
मलाई यो मन पर्छ। तर के तपाईं "मिडलवेयर" लाई बेवास्ता गरिरहनु भएको छैन जसले नब्बेको दशकमा हाम्रा सबै समस्याहरू समाधान गर्दछ। मलाई वेबवेयर मन पर्छ। चाखलाग्दो कुरा त्यहाँ ट्रेडमार्क छैन। दयाको URL सबै भन्दा राम्रो लिईएको छ।
जनवरी 17, 2008 मा 10: 07 एएम
म वास्तवमै सबै वेब-आधारित अनुप्रयोगहरूलाई प्रेम गर्दछु जुन आउन जारी छ र मेरो टूलकिटमा थपिन्छ। म पागल जस्तै गुगल डक्स प्रयोग गर्दछु र जो एकै दिनमा different- different फरक कम्प्युटरहरू प्रयोग गर्दछ, यो लाइफ सेभर हो।
जे होस्, हरेक चोटि जब म नयाँ वेबमा आधारित सेवा प्रयोग गर्न सुरू गर्छु, त्यहाँ सधैं मेरो टाउको पछाडि यो सानो आवाज एक बिन्दुमा टाँसिरहन्छ। त्यो विन्दु यो हो कि जब म आफ्नो इन्टरनेट जडान हराउँछु, म मेरो सबै Google कागजातहरूमा पहुँच हराउँछु, मेरो ग्राहकको इनभ्वाइसहरूको डाटाबेस, मेरो ईमेल, मेरो आईएम, फ्लिकरमा मेरा अनगिन्ती फोटोहरू आदि। आदि।
वेबवेयर तिरको यो बदलावले हामीलाई हाम्रो टोकरीमा धेरै भन्दा धेरै अण्डाहरू राख्दछ। र त्यसपछि हामी त्यस टोकरीमा लामो डोरी बाँध्छौं र यसलाई अन्तरिक्षमा भाँच्दछौं। जबसम्म डोरी जडित हुन्छ, सबै मीठा छ। तर जब त्यो डोरी हराउँदछ, म पनि शक्तिविहीन हुन सक्छ।
मलाई लाग्छ मेरो विन्दु यहाँ छ कि वेबवेयरलाई वास्तवमै बन्द गर्न को लागी, हामीलाई थप भरपर्दो, व्यापक, र इन्टरनेटमा अनावश्यक पहुँच चाहिन्छ। र तपाईंको फोनमा एक वेब ब्राउजर भएको समान छैन। अवश्य पनि, म मेरो ल्यापटपलाई मेरो भेरिजोन मोबाइल फोन र सर्फमा जडान गर्न सक्दछु, तर यदि म एक निश्चित ब्यान्डविथमा जान्छु वा एकै महिनामा डाउनलोड सीमा डाउनलोड गर्छु भने, म बुटिन्छु। मलाई त्यस्तो तनावको आवश्यकता छैन।
जनवरी १, २०१ 17 १२::2008 अपराह्न
रमाईलो तपाईं यसको उल्लेख गर्नु पर्छ। मैले हिजो मात्र एक ग्राहकलाई भनेको थिएँ कि मैले चलाएको धेरै सफ्टवेयर वेब अनुप्रयोगको रूपमा इन्टरनेटमा मात्र अवस्थित छन्। अब मलाई थाहा छ के यो चीजहरू भनिन्छ ... वेबवेयर!
जनवरी 18, 2008 मा 7: 29 एएम
म केहि समय को लागी उस्तै कुरा गरिरहेको छु… मँ पहिले नै वेबवेयर को रूप मा CMS / अनलाईन अनुप्रयोगहरु लाई संदर्भ गर्दछु… म आश्चर्यचकित छु कि हामी यसको बारेमा अधिक सुन्न पाएनौं।
जोन राउल जोवेन दोस्रो
जनवरी 18, 2008 मा 9: 39 एएम
वेबवेयर राम्रो देखिन्छ। चाँडै, सबै ठूला कम्प्युटर / आईटी कम्पनीहरू वेबमा तिनीहरूको उत्पादनहरू द्वारा टकराव हुनेछन्। यो प्रवृत्ति हो र वेब झुकाइएको सफ्टवेयरको आगमनको साथ हुन शुरू भयो।